Dingana enina amin'ny dian'ny mpividy B2B | Martech Zone
Betsaka ny lahatsoratra momba ny dian'ny mpividy tao anatin'izay taona vitsy lasa izay sy ny fomba tokony hiovan'ny orinasa amin'ny fomba nomerika hahitana ny fiovan'ny toetran'ny mpividy. Ireo dingana andalovan'ny mpividy dia lafiny manakiana ny varotra ankapobeny sy ny paikadinao amin'ny varotra mba hahazoana antoka fa manome ny fampahalalana ho an'ny prospect na mpanjifa aiza sy oviana izy ireo no mitady azy.
In Fanavaozana CSO an'i Gartner, manao asa mahafinaritra izy ireo amin'ny fizarana sy amin'ny antsipiriany ny fomba fiasan'ny mpividy B2B manomboka amin'ny olana ka hatramin'ny fividianana vahaolana. Tsy ny varotra lantonoara izay noraisin'ny ankamaroan'ny orinasa ary refesina. Mamporisika ny rehetra hisoratra anarana sy hisintona ny tatitra aho.
Sintomy: Ny dia mividy B2B vaovao ary ny vokany eo amin'ny varotra
Dingana fitsangatsanganana mpividy B2B
Famantarana ny olana - manana olana izay ezahin'izy ireo ahitsy ny orinasa. Ny atiny omenao amin'ity dingana ity dia tsy maintsy manampy azy ireo hahatakatra tsara ny olana, ny vidin'ny olana amin'ny fikambanan'izy ireo ary ny fiverenan'ny fampiasam-bola ny vahaolana. Amin'izao fotoana izao dia tsy mitady ny vokatrao na serivisinao akory izy ireo - fa amin'ny fanatrehanao sy fanomezana ny fahaiza-manaon'izy ireo hamaritana tanteraka ny olan'izy ireo dia efa mivoaka ny vavahady ianao ho toy ny mpamatsy vahaolana.
Fikarohana vahaolana - ankehitriny rehefa takatry ny orinasa ny olany dia tsy maintsy mitady vahaolana izy ireo. Eto no ilana ny doka, fikarohana ary haino aman-jery sosialy ny fifandraisan'ny fikambanana misy anao. Tokony ho eo amin'ny fikarohana ianao miaraka amin'ny atiny mahatalanjona izay hanome ny fahatokisan-tena amin'ny filanao antenaina fa vahaolana mety ianao. Tsy maintsy manana ekipa mpivarotra mavitrika sy mpisolovava izay manatrika ihany koa ianao izay mangataka fampahalalana amin'ny tambajotram-pifandraisana ny mpanjifanao sy ny mpanjifanao.
Fananganana takiana - ny orinasanao dia tsy tokony hiandry ny fangatahana tolo-kevitra hanome antsipiriany ny fomba hanampianao amin'ny fanatanterahana ny zavatra takian'izy ireo. Raha azonao atao ny manampy ny vinavinanao sy ny mpanjifanao hanoratra ny zavatra takian'izy ireo dia afaka mahazo mialoha ny fifaninanana ianao amin'ny alàlan'ny fanasongadinana ireo tanjaka sy tombony fanampiny amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasanao. Ity dia faritra izay nifantohako foana ho an'ireo mpanjifa nanampy anay. Raha manao ny asa sarotra ianao amin'ny fanampiana azy ireo hamorona ny lisitra, mahatakatra ny fandaharam-potoana, ary manisa ny fiantraikan'ny vahaolana, dia ho voatarika haingana any amin'ny lohan'ireo lisitra vahaolana ianao.
Safidin'ny mpamatsy - Ny tranokalanao, ny fisian'ny fikarohana anao, ny fisian'ny media sosialy anao, ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mpanjifanao, ny tranga fampiasanao, ny fahitana ny fahaiza-mitarika ny eritreritrao, ny fanamarinana, ny loharano ary ny fanekena ny indostria dia manampy amin'ny fametrahana mora ny vinavinanao fa orinasa ianao maniry ny hanao orinasa miaraka izy ireo. Ny orinasam-pifandraisanao amin'ny besinimaro dia tokony ho lohalaharana hahazoana antoka fa voatonona foana ianao amin'ny famoahana indostria amin'ny maha mpamatsy ny vokatra sy serivisy fikarohana ataon'ny mpividy. Ireo mpividy raharaham-barotra dia mety handeha amin'ny vahaolana izay tsy mahatratra ny marika rehetra… fa fantatr'izy ireo fa afaka matoky izy ireo. Ity dia dingana iray manakiana ny ekipa mpivarotra anao.
Fanamafisana ny vahaolana - Solontenan'ny fampandrosoana orinasa (BDR) na solontenan'ny fampandrosoana (SDR) dia mahay mampifanaraka ny filan'ny mpanjifa ary mametraka ny andrasana amin'ny fahafahan'izy ireo manome ny vahaolana. Ny fandalinana tranga izay mifanaraka amin'ny indostrian'ny prospect anao sy ny fahamatorany dia tena ilaina eto mba hamantaran'ny maso anao fa mety hamaha ny olan'izy ireo ny vahaolana. Ny orinasa manana ny enti-manana aza mety hampiasa vola amin'ny prototypes amin'izao fotoana izao mba hahitan'ny prospect fa nieritreritra ny vahaolana izy ireo.
Famoronana marimaritra iraisana - Amin'ny raharaham-barotra, tsy dia miara-miasa amin'ny mpanapa-kevitra izahay. Matetika kokoa, ny fanapahan-kevitry ny fividianana dia avela eken'ny ekipa mpitarika ary nekena avy eo. Mampalahelo fa matetika isika dia tsy afaka miditra amin'ny ekipa iray manontolo. Ny solontenan'ny mpivarotra matotra dia mahatakatra tsara izany ary afaka manaofana ny mpikambana ao amin'ny ekipa amin'ny fomba fampisehoana ny vahaolana, manavaka ny orinasany amin'ny fifaninanana ary manampy ny ekipa handalo ny fizotran'ny fankatoavana.
Ireo dingana ireo dia tsy mandeha matetika hatrany. Matetika ny orinasa dia miasa amin'ny dingana iray na maromaro, manova ny zavatra takiny, na manitatra na manenjana ny fifantohany rehefa mandroso mankany amin'ny fividianana. Ny fiantohana ny varotrao sy ny varotrao dia mifanaraka sy malefaka handraisana ireo fanovana ireo dia zava-dehibe amin'ny fahombiazanao.
Mandrosoa miakatra amin'ny dian'ny mpividy anao
Mpivarotra B2B maro no mametra ny fampahafantaran'ny orinasany ny mpanjifa ho avy amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny fahitana azy ireo ho mpivarotra afaka manome ny vokatra na serivisy. Paikady famerana izany satria tsy teo aloha izy ireo tamin'ny tsingerin'ny fividianana.
Raha misy raharaham-barotra mikaroka fanamby atrehin'izy ireo dia tsy voatery hoe mitady orinasa hivarotra vokatra na serivisy ho azy ireo izy ireo. Ny ankamaroan'ny dingana amin'ny B2B Buying Journey dia mialoha fifidianan'ny mpivarotra.
Raharaha amin'ny tranga; angamba misy mpanjifa ho avy miasa amin'ny Technology Technology ary te hampiditra traikefa finday amin'ireo mpanjifany. Mety hanomboka amin'ny fikarohana ny indostrian'izy ireo sy ny fomba fampidiran'ny mpanjifany na ny mpifaninana aminy traikefa finday amin'ny traikefan'ny mpanjifa ankapobeny izy ireo.
Ny diany dia manomboka amin'ny fikarohana momba ny fananganana finday ary raha toa ny mpanjifan'izy ireo mety hampiasa marketing amin'ny hafatra an-tsoratra na fampiharana finday. Rehefa mamaky ny lahatsoratra izy ireo, dia hitanao fa misy mpiara-miombon'antoka fampiroboroboana, mpiara-miombon'antoka amin'ny fampandrosoana, fangatahana antoko fahatelo, ary safidy marobe.
Amin'ity fotoana ity, tsy hahavariana ve raha ny orinasanao - iza no mamorona fampidirana sarotra ho an'ny orinasa Fintech eo amin'ny fanampiana azy ireo hahatakatra ny fahasarotan'ny olana? Ny valiny tsotra dia Eny. Tsy fotoana tokony hampiroboroboana ny vahaolanao (fa), hanomezana torolàlana azy ireo fotsiny mba hanampiana azy ireo hahomby amin'ny asany sy eo amin'ny sehatry ny asany.
Raha nanamboatra ireo torolàlana feno indrindra manodidina ny famaritana olana ianao ary nanome ny fikarohana manohana - ny fahatsinjovana dia efa mahatakatra fa azonao tsara ny olan'izy ireo, ny indostria ary ny fanamby atrehin'izy ireo. Ny orinasanao dia efa manan-danja amin'ny vinavina ary ny orinasanao dia manangana fahefana sy matoky azy ireo miaraka aminy.
Ny sehatry ny dia ary ny tranombokin'ny atiny
Ireo dingana ireo dia tsy maintsy ampidirina ao amin'ny tranombokin'ny atiny. Raha te hanana tetiandro atiny ianao dia manomboka amin'ny dingana ny dia ny mpividy dia singa iray lehibe amin'ny drafitrao. Ity misy ohatra tsara momba izay toa ny Gartner's CSO Update:
Ny dingana tsirairay dia tokony horavana amin'ny fikarohana be dia be mba hahazoana antoka fa manana ny pejy, ny sary, ny horonan-tsary, ny fandinihana tranga, ny fijoroana vavolombelona, ​​ny lisitra fanaraha-maso, ny fikajiana ary ny fizotry ny fotoana… ny zava-drehetra mifandraika amin'ny fanomezana ny mpividy B2B anao fampahalalana ilain'izy ireo hanampiana azy ireo.
Ny tranombokinao votoatiny dia tokony ho voarindra tsara, mora karohina, marika tsy miova, voasoratra fohifohy, manana fikarohana manohana, azo jerena amin'ny medium (lahatsoratra, sary, horonan-tsary), nohamarinina indrindra ho an'ny finday, ary misy ifandraisany amin'ny mpividy izay tianao mitady
Ny tanjona ankapobeny amin'ny ezaky ny varotrao dia ny ahafahan'ny mpividy mivoatra araka izay tadiavin'izy ireo mandritra ny dian'ny mpividy raha tsy mila mifandray amin'ny orinasanao ianao. Ny prospect dia te-handingana amin'ireo dingana ireo raha tsy misy ny fanampian'ny mpiasao. Na dia manararaotra aza ny fampidirana ireo mpiasao aloha kokoa amin'ny dingana dia tsy azo atao foana izany.
Ny fampidirana ny ezaky ny varotra omni-Channel dia zava-dehibe amin'ny fahafahanao manidy an'ity orinasa ity. Raha tsy mahita ny fanampiana ilain'izy ireo hampahafantatra sy hampandroso ny diany ny vinavinanao dia mora kokoa aminao ny mamoy azy ireo amin'ny mpifaninana iray izay nanao izany.
Tags: b2bdia ny mpividy b2bdia ny mpanjifa b2bdia ny mpividyfamoronana marimaritra iraisanafanavaozana ny csoMpanjanantanygartnerfamantarana ny olanafananganana takianafitrandrahana vahaolanafanamarinana vahaolanafifantenana mpamatsy
Paikady coupon 7 azonao ampidirina ho an'ny areti-mifindra handroahana fiovam-po bebe kokoa amin'ny Internet